‘सन्जु’मा अनुष्काको भूमिका के होला त ? - Koshi Online
जेठ १६, बलिउडमा २०१८ का नयाँ फिल्महरुमध्ये बहुप्रतिक्षित फिल्म कै रुपमा रह्यो सञ्जय दञ्को जीवनमा आधारित बायोपिक फिल्म ‘सन्जु’ । कडा मेहेनताका साथ सञ्जयको हुबहु नक्कल गरेका अभिनेता रणवीर कपूरले बलिउडमा निकै चर्चा बनाए ।
चलचित्रमा बलिउडका थुपै कलाकारले सञ्जयका पारिवारीक सदस्यको भूमिका निभएका छन् । रणवीरले सञ्जयको भूमिका निभाएका छन् भने सञ्जय दत्तकी प्रेमिकामा टिना मुनीमको भूमिकामा सोनम कपूर, सञ्जय दत्तका बुवा सुनिल दत्तको भूमिका परेश रावल, सञ्जयका आमा नरगिसको भूमिकामा अभिनेत्री मनिषा कोइराला र सञ्जयकी श्रीमतिको भूमिकामा अभिनेत्री दिया मिर्जाले अभिनय गरिरहेका छन् । यसैगरी सलमान खानको रुपमा जिम सरब, टीना मुनिमको रुपमा सोनम कपुर र माधुरी दीक्षितको रुपमा तमन्नाको भूमिका छ ।
हालैमात्र यसका निर्देशक राजकुमार हिरानीले यसैफिल्मको अनुष्का समावेश रहेको एक पोस्टर सार्वजनिक गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘र उनी मेरी प्रिय साथी अनुष्का हुन् । फिल्ममा उनको विशेष भूमिका छ । यो रोलको लागि उनले कडा मिहिनेत गरेकी छन् । के कसैले बताउन सक्छ कि फिल्ममा उनको भूमिका के छ ?’
साँच्चै उनको भूमिका के छ ? यसको कुनै चर्चा छैन् । फिल्ममा उनले अभिनय गरेकी छन् भन्ने कुरा भारतीय सञ्चामाध्यममा उल्लेख भएको थियो तर उनी के भूमिकामा छिन् भन्ने कतै उल्लेख छैन् ।
पोष्टरमा अनुष्का फरक लुक्समा देखिन्छिन् । उनको कपाल छोटो र कर्ली छ । पोष्टरको पृष्ठभूमिमा सञ्जय दत्त बनेका रणवीर कपुर छन् ।
फिल्म सन्जु जुन २९ मा प्रदर्शनमा आउँदैछ । चलचित्रले हालसम्म टिजर र पोस्टरहरु मात्र सार्वजनिक भएको छ ।